Maninona no tokony hihoatra ny CRM nentim-paharazana ny varotra sy ny varotra an-tsaha | Martech Zone
Arakaraka ny maha-tsy mitombona izao tontolo izao miaraka amin'ny herin'ny haitao - haino aman-jery sosialy, fifampiresahana horonan-tsary, sns. Nisy fotoana iray naneho tena tamin'ny fomba tena izy. Ny foto-kevitra iray izay tonga voajanahary, intuitive ary nisy taloha be dia be toy ny eritreritra aorian'ny famerenana azy dia nafindra ho amin'ny adaptation tsy manelingelina sy lafo kokoa. Ny fahazoana ara-batana eo imason'ny olona tianao hifandraisana. Toa fiheverana manjavozavo miharihary izany, fa ny tena zava-misy dia ny fiarahamonintsika dia nifindra tamin'ny endrika fifandraisana tsy dia manokana loatra amin'ny anaran'ny mora.
Tsy izany no tsapantsika momba ity tetezamita eo amin'ny fiaraha-monina ity. Ny tanjoko amin'ity sombin-javatra ity dia ny hiresaka momba ny fiantraikan'ity zava-misy vaovao ity amin'ny hetsika fivarotana sy ny fampiasana fitaovam-pivarotana. Ataovy mazava tsara fa ireo matihanina amin'ny varotra dia afaka manararaotra ireo fotoana nanokafana vokatry ny fitomboan'ny fidiran'ny varotra dizitaly sy ny tetika marketing miaraka amin'ny fitomboan'ny fiankinan-doha amin'ny asa atao amin'ny varotra.
Ny fahazoana avy ao ambadiky ny birao sy ny fifandraisanao amina prospect dia fomba mora hanavahana ny mpivarotra am-paosy. Izy io koa dia manome azy ireo ny fahafahany mifandray sy mamorona fifandraisana amin'ireo olona izay mety hividy ny vokatra na serivisy atolotray. Raha marina izany, dia ny marina ihany koa dia ny hevitra fa mila ny fanohananana sy ny fampahalalana mety izy ireo mba hahafahany manatanteraka tsara rehefa eny an-tsaha. Ny fitaovana fampitaovana fivarotana sy ny haitao dia ohatra tsara dia fomba iray hampitomboana ny fanohanana.
Niasa be aho tamin'ny anjara asan'ny varotra anatiny sy ivelany. Ny fiasan'ny asan'ny asany tsirairay avy dia samy hafa tanteraka amin'ny fiovana tsy manam-paharoa misy fiantraikany amin'ny vokatra azo. Amin'ny maha-solontenan'ny mpivarotra ahy ao anatiny dia nipetraka tao amin'ny efitranoko aho, na niantso ahy an-tariby nandritra ny tontolo andro teo anelanelan'ny fandefasana sy ny famaliana ireo mailaka. Ny tolo-kevitr'asa, ny famenoana ny tatitra sy ny firaketana ny fampiasa amin'ny mpanjifa ao amin'ny CRM dia ampahany amin'ny isan'andro ihany koa. Amin'ny maha repoblika ivelany ahy dia tsy maintsy nataoko ireo zavatra ireo alohan'ny sy aorian'ny fitsidihan'ny olona matetika matetika rehefa mipetraka ao anaty fiarako aho. Tena nanam-bintana aho raha nanao izany tamin'ny alàlan'ny fifamoivoizana haingana (izay tsy mitranga matetika any Houston). Ireo zava-misy toy ny fotoan'ny andro miaraka amin'ny toetry ny toetrandro dia azo antoka fa voafaritra tsara raha sendra misy fihenjanana na tsia. Raha toa ka nametraka hetsika tamin'ny iray amin'ireo kaontin'ny mpanjifako aho dia tompon'andraikitra tamin'ny fakana ny valiny (fatra sy qualitative) raha teo amin'ny toerana. Fohy ny tantara lava - misy antony marobe tafiditra ao amin'ny andraikitro isan'andro amin'ny maha-mpivarotra ivelany ahy, ary noho izany dia miovaova kokoa ny fiatraikany amin'ny fahafaha-manao fahombiazana.
Avy amin'ny lafiny fitantanan-draharaha dia nahavita miisa 80 ny mpiasam-barotra isaky ny fotoana izay nanatanteraka tamim-pahavitrihana ny asa fivarotana nanerana ny tsenan'izy ireo isan-karazany tamin'ny fotoana tsy tapaka isan'andro. Miaraka amin'ireo masoivoho ireo miasa lavitra amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena, dia nisy ny fahasarotana amin'ny fahazoana, ny fahazoana hevi-javatra ary ny fampiasana fomba fijery sarobidy momba ny maha-izy azy ireo tsena izay ezahantsika hifaninanana. Raha tsy nisy an'io fampahalalana io dia sarotra kokoa ny nitondra tetika an-tsaha ny tetika an-tsaha.
Olana amin'ny CRM nentim-paharazana
Ireo fitaovana fivarotana misy dia natsangana voalohany indrindra ho an'ny andraikitry ny varotra anatiny. Ny CRM nentim-paharazana dia manana interface izay mifanaraka tsara amin'ny andavan'andro amin'ny fanaovana antso an-tariby sy fandefasana mailaka. Tsy mahomby izy ireo ho an'ny rep mpivarotra ivelany izay mandeha ary tsy mahazo miditra amin'ny birao na WiFi foana.
Ny ekipa mpivarotra any ivelany sy ny varotra any ivelany dia mila fitaovana namboarina hanohanana ny fivoaran'ny sehatr'asa isan'andro. Ny fampiharana varotra an-tsaha finday natokana ho an'ny hetsika varotra eo an-toerana dia afaka manampy ny orinasa hahazo sy hampiasa ny angon-drakitra, hanara-penitra ny asa eny an-tsaha, hampirisika ny fiaraha-miasa, hitana andraikitra amin'ny reps ary hampitombo ny vokatra.
Ahoana no ahafahan'ny Reps any ivelany mampiasa ny teknolojia
Araka ny efa voalaza, dia mandehandeha matetika ny masoivoho iray any ivelany, ary mivory mifanatrika ary sendra tranga tsy ampoizina mandritra ny androny. Ohatra, ny toetr'andro ratsy, ny fitohanan'ny fifamoivoizana ary ny fotoana fanaovana hetsika dia mety hisy fiatraikany amin'ny andro ho an'ny rep rep, ary amin'ny fanitarana ny zava-bitany. Izany no antony tsy hamitan'ny CRM nentim-paharazana ny filan'ireo orinasa mifaninana amin'ny hetsika varotra ivelany. Ny Reps dia mitaky vahaolana teknolojia namboarina hiatrehana ireo nuances izay mampiavaka ny onjam-piasan'izy ireo.
Betsaka ny fomba fijerin'ny repoblika eny an-tsaha hanatsarana ny fahaizany amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia, ireto misy ohatra efatra.
Ny fandaminana ny andro dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny rep rep. Taloha, be loatra ireo nitsambikina avy teo am-pandriana tamin'ny maraina ary nanapa-kevitra ny amin'izay toerana halehany amin'izany andro izany. Mazava ho azy fa tsara kokoa ny mieritreritra bebe kokoa raha ny amin'ny fitsidihana ny kaonty ho avy na ny amin'izao fotoana izao. Na izany aza, tsy azo atao foana izany mifototra amin'ny fitaovana omena ny reps - tena ilaina ny interface teknolojia tsotra sy mora ampiasaina eto. Izy ireo dia hamela ny reps ny fahaizana maka fotoana handaminana mora foana ny kalandrie mandritra ny roa herinandro ka hatramin'ny iray volana mialoha raha irin'izy ireo.
Izany dia manampy azy ireo hijanona sy hieritreritra momba ny mpanjifa tsirairay ao amin'ny faritaniny ary mahatonga azy ireo hieritreritra stratejika bebe kokoa. Ankoatr'izay, azonao atao ny mijery ny faritaninao amin'ny sarintany mivantana a App varotra an-tsaha ary manapaka ny ora fitaratra sy ny fotoana fivezivezena. Arakaraka ny maha-kely ny fotoana andehanany dia vao mainka mahasolo ny fifampiraharahana sy fikarakarana ny mpanjifa ny solo-potoana.
2. Data momba ny kaonty
Ireo Reps dia manana data marobe izay ilain'izy ireo idirana sy alamina. Rehefa miasa ao anaty ny varotra ianao dia manana lafo vidy amin'ny fisintomana ny solaitrabe CRM mandritra ny antso hijerena ireo naoty. Ny rep rep izay tsy manana izany tombony izany amin'ny fotoana rehetra. Mila afaka miditra amin'ny fampahalalana fototra momba ny tantaran'ny kaonty izy ireo rehefa mandeha. Izy ireo koa dia mila afaka manavao ny mombamomba ny kaonty aorian'ny fijanonana amin'ny fomba mahomby. Ny fanomezana fidirana finday amin'ny angona kaonty dia hanampy be dia be amin'ny reps.
3. Fakafakao ny angona
Ankehitriny rehefa manana ny angona ianao dia mila manao zavatra amin'izany. Hanjary ao ambadiky ny fifaninanana ianao raha tsy manadihady angona manodidina ny asa, ny tsena kendrena ary ny mpanjifa. Izany dia mihoatra ny mijery mihoatra ny isa fivarotana. Midika izany fa mandinika marina na miasa na tsia ny zavatra ataonao. Miaraka amin'ny teknolojia ankehitriny, ny rep dia tsy tokony hiankina amin'ny olon-kafa ao anatin'ny orinasa hijerena ny angon-drakitra misy azy ireo ary hampita izany indray. Miaraka amin'ny haitao misy ankehitriny, maro ny fizotran'ny fandalinana no mandeha ho azy ankehitriny, ahafahan'ny mpiasan'ny varotra mampiasa vola amin'ny famakafakana data ho azy ireo.
Fanamby lehibe ho an'ireo ekipa mpivarotra ivelany ny fiasan'izy ireo mifanalavitra. Io dia mametra ny famindrana fahalalana mety hitranga amin'ny ekipa miara-miasa. Raha tsy misy izany famindrana fahalalana izany dia mety hamerina ny hadisoan'ny mpiara-miasa aminy ireo reps. Betsaka ny tombontsoa azo avy amin'ny fifandraisana matetika amin'ny mpiara-miasa matetika toy ny fizarana fomba fanao tsara indrindra, ny fampiroboroboana ny fifaninanana ary ny fifaninanana am-pirahalahiana. Ny fampiasana fitaovana hiresahana sy hiaraha-miasa amin'ireo repoblika hafa dia fomba iray lehibe hanamafisana ny zava-bita.
Ahoana no ahafahan'ny mpitantana ny varotra mampiasa teknolojia
Ny fampiharana varotra saha avo lenta dia tsy natao ho an'ny repoblika fotsiny. Amin'ny tranga sasany, dia mety ho sarobidy kokoa amin'ireo mpitantana ny varotra izany. Raha ny valim-pikarohanay, 60% amin'ireo mpitantana ny varotra no manana ahiahy noho ny fahitana kely momba ny hetsika ataon'izy ireo. Izy ireo dia manana ny andraikitra sarotra amin'ny fahafantarana izay ataon'ny repoblika tsirairay isaky ny faritany, manaraka ny fironana amin'ny tsena sy ny fiovana isan-karazany misy fiatraikany amin'ny andro fiasan'ny rep. Manana angona be dia be ilain'izy ireo izy ireo mba hanokanana fotoana sy loharanom-pahalalana tsara indrindra ho an'ny ROI lehibe indrindra. Ireto misy fomba lehibe vitsivitsy ahafahan'ny mpitantana fivarotana mampiasa teknolojia.
Tazomy ny Database - Ny fananana firaketana ny lafiny fifandraisana tsirairay amin'ny mpanjifa dia zava-dehibe amin'ny varotra rehetra. Mety hanaporofo izany fa sarotra amin'ny varotra an-tsaha satria lavitra ny birao amin'ny toerana sendra azy. Ny fananana fitaovana ho an'ny reps hanoratra hoe mandra-pahoviana no nijanonany ary inona no atao any dia ahafahan'ny mpitantana manana fahatakarana tsara kokoa momba ny toerana hendry ny kaonty tsirairay.
Fanamarinana kalitao - Ny mpitantana sy ny repoblika dia mitady marimaritra iraisana foana eo amin'ny fahalalahana sy ny fandraisana andraikitra. Amin'ny varotra an-tsaha, ny mpitantana dia mety manana ahiahy amin'ny hetsika ataon'ny rep satria tsy mahita azy ireo miasa foana. Ny rindranasa fivarotana an-tserasera sy tranonkala mifototra amin'ny finday dia afaka manome endrika sy fangatahana fangatahana ho an'ny solo-draharaha mandritra ny fijanonana hanarahana ny asan'izy ireo amin'ny fanampiana tsy an-tsokosoko hanamaivanana ireo olana mety hananan'ny mpitantana.
Manara-penitra amin'ny Operations - Repoblika fivarotana matetika no endrik'ilay orinasa. Ianao dia te-hahazo antoka fa misolo tena tsara ny marika izy ireo. Ankoatr'izay, raha mandamina sy manara-maso ekipa lavitra iray ianao, dia azonao antoka fa manaraka ny fomba fanao rehetra izy ireo. Ireo endrika sy valim-panadihadiana dia mameno ny fandraisana andraikitra sy ny tatitra, manome koa ny mpitantana fomba iray hanara-penitra ny asa amin'ny ekipany.
Fijerin'ny fantsona - Mila mahafantatra ny mpitantana iray izay misy kaonty samihafa ao anatin'ny fantsona. Mila ny fahaizana mandrafitra, mirakitra ary manara-maso ireo dingana samihafa amin'ny tsingerin'ny varotra izy ireo. Miaraka amin'ny fampiharana varotra saha avo lenta, ny reps dia afaka manoratra vaovao farany amin'ny kaonty ary ny mpitantana dia afaka mahita ireo fanavaozana ireo ary mandamina ara-pahitana izay misy ny mpanjifa ho avy.
Outfield - Fitaovana namboarina ho an'ny varotra an-tsaha
Outfield dia rindrambaiko miorina amin'ny CRM sy finday miorina-CRM ary mivarotra an-tsaha manolotra fampiharana ho an'ny iPhone, Android ary tranonkala. Ny sehatra dia manompo ekipa mpivarotra sy marketing any ivelan'ny firenena 70 mahery. Outfield dia manampy ny mpitantana ny varotra sy ny repoblika mitovy. Ho an'ny mpitantana ny saha, ahafahany mahita fomba fijery momba ny tsenany, manara-maso sy manamarina ny asan'ny ekipa, ary mifampita amin'ny fitaovana rehetra. Izy ireo no mamatsy ny tatitra sy ny orinasa analytics mila mitantana ny varotra any an-tsaha sy ny programa marketing. Ho an'ny repoblika any an-tsaha, Outfield dia manampy amin'ny fampitomboana ny famokarana, ny fidiram-bola ary ny fitantanana ny hetsika ataon'izy ireo. Ny fampiharana finday dia manome interface intuitive hitantanana ny faritaniny sy ny kaontin'izy ireo mandritra ny diany. Ny rep dia afaka mamorona haingana ny hetsika fitsidihana, manome fanamarihana, ary koa mitazona sy mahazo vaovao mivaingana momba ny mpividy. Outfield dia manome reps ny fahaizana mijanona hifandray amin'ireo mpiara-miasa, mpiandraikitra na mpiasa hafa.
Outfield dia natao miaraka amin'ny ekipa mpivarotra an-tsaha ao an-tsaina. Izy ireo dia manome vahaolana amin'ny varotra an-tsaha, fitantanana ny faritany, drafitra làlana, varotra, varotra ary fanaovana sarintany ary fivarotana an-tsaha.
Ireto misy fitaovana vitsivitsy omen'ny Outfield hanampiana amin'ny fampitomboana ny famokarana avy amin'ny repoblika.
Kalandrie momba ny drafitra - Outfield dia manome tranokala ary kalandrie finday hanampiana azy ireo handamina ny fitsidihan'izy ireo mialoha mba hitazomana azy ireo handamina. Afaka manangana fampahatsiahivana ao amin'ny kalandrie izy ireo mba hanao zavatra toy ny fijanonan'ny mpanjifa sasany. Izy io koa dia ahafahan'ny mpanara-maso mijanona eo amin'ny loopin'ny zavatra ataon'ny repoblika.
Fanatsarana ny zotra - Sarobidy tokoa ny manatsara ny lalana. Fantatry ny repona rehetra fa mpanova lalao ny fanapahana ny fotoana fitaratra. Fandaharam-potoana ivelany ny fitsidihanao ary manampy anao handamina ny làlambe fijanonana maro arak'izany. Outfield dia afaka maminavina sy manatsara ny fivezivezenao miorina amin'ny angon-drakitra ara-tantara sy ny zava-mitranga amin'ny fotoana tena.
Hetsika ekipa - Amin'ny alàlan'ny Outfield, azonao atao ny manara-maso ny repoblika amin'ny fotoana tena izy, mifampiresaka ary ny mpitantana dia afaka manao repte coach. Handefa fampandrenesana ilay fampiharana mba hahazoana antoka fa hahazo vaovao ara-potoana ara-potoana ireo mpiara-miasa aminy.
Gamification - Ny varotra gamifying dia fomba tsotra amin'ny fampiasana fitsipika sy traikefa gamified ao anatin'ny asan'ny varotrao mba hanomezana fandrisihana sy handroahana fifaninanana sariaka. Ny sehatry ny Outfield dia ahafahan'ny mpampiasa manetsiketsika ny asany varotra ary manatsara ny fahombiazan'ny mpiasa.
Outfield amin'ny hetsika
palladium, mpitsabo mpanampy sy mpitsabo mpanampy, mampiasa Outfield ho an'ny ezak'izy ireo amin'ny varotra ivelany sy marketing. Hitan'izy ireo fa mahasoa izany na amin'ny andavan'andro na amin'ny fotoana lavitra. Raymond Lewis, VP an'ny Business Development ao Palladium dia mitanisa ny tombony lehibe azo avy amin'ny Outfield dia manampy azy ireo hiomana izany. Ho an'ny indostria toy ny fahasalamana dia afaka enim-bolana ka hatramin'ny herintaona vao manatrika fanapahan-kevitra raisina ianao.
Amin'ny alàlan'ny Outfield, Palladium dia afaka manara-maso ireo lafiny rehetra ananan'ny reps - iza no miaraka amin'izy ireo, inona no voalaza, inona ny fanontaniana napetraka ary maro hafa. Io dia ahafahan'izy ireo ho voaomana tsara kokoa rehefa tonga ny fotoana hihaonana amin'ilay mpanapa-kevitra farany. Amin'ny andavan'andro, Palladium dia manararaotra ny fanatsarana ny làlana. Izy ireo dia afaka mamantatra loharanom-pahalalana vaovao amin'ny alalany, manomana làlana ary mampifandray izany amin'ny rafitra fitetezana izay nofidiny. Io dia ahafahan'ny solo-dry zareo miasa mahomby.
Mandeha hatrany ny rep rep iray ary mila fitaovana haingana, tsotra ampiasaina izy ireo ary afaka mandeha miaraka amin'izy ireo. Ny fivoahana solosaina, mifandray amin'ny wifi sy fampidirana fampahalalana dia tsy mahomby toa ny famoahana ny findainao finday ary fampidirana fampahalalana ao anaty interface intuitive. Ny fikambanana iray dia mila fidirana amin'ny birao sy fidirana finday amin'ny farany. Ny vahaolana finday dia natao hanohanana ny fandehan'ny asa-tanana aorian'ny fandehanan'izy ireo. Outfield dia manompo mpanjifa an-jatony erak'izao tontolo izao. Ny tampon'izy ireo ambony dia misy ny CPG, CE ary ny fiantohana.
Andramo maimaimpoana i Outfield
Tags: rep repsolontenan'ny sahavarotra an-tsahaoutfieldfampiharana ivelanysolontenan'ny varotrasolontenan'ny mpivarotra